Banyere Anyị - Nnukwu Ngwunye Silver (ShenZhen) Co., Ltd.
Adalata ihe omuma ihe nkiri
GS PACK, isi ụlọ ọrụ dị na Hongkong, nke e guzobere na 1993, ọ dị n'akụkụ ọmarịcha ezumike nke Shiyan Lake. Ebe ezumike na GuangMing New District, Shenzhen, China. Njem nkeji 20 gaa Shenzhen International Airport. Anyị bụ otu n'ime ndị kasị ibu ọkachamara na-emepụta na-amị polyolefin Ada Ada film na China. Na mbụ nnukwu onye rụrụ n'ebe ndịda China onye nwere ihe karịrị afọ 19 ahụmahụ na n'ichepụta mekotaonwe nkwakọ ngwaahịa.
Ka ọ dị ugbu a, anyị nwere GS Standard, GSS LT, G SHot Slip, GS Super 11 & 10micornP OF shrink films. Site na ike ọmụmụ siri ike, yana ndị otu lekwasịrị anya nke ọma na-aga n'ihu na-emepe ọtụtụ ụdị 5-Layer Co-extruded polyolefin packing materials.table quality and high performance in our films. Na-eme ka ọ dabara nke ọma na Manual, Semi-automatic na Automatic Ada Ada mbukota igwe.
Anyị factory ekpuchi 20,000 square mita na 7 akpaka POF5layerCo-Extruded Ada Ada fim mmepụta ahịrị. Akụ bara ụba na isi obodo dị ike, mmepụta kwa afọ bụ 12000tons (Oke kachasị: 3500mm) ma yabụ ugbu a, anyị abụrụla nnukwu onye nrụpụta ọrụ na -emepụta ụdị enyi na gburugburu ebe obibi (P OF) 5-layer Co extruded. Polyolefin Ada Ada Films na South China.
E wezụga ọgwụgwụ-ọrụ, anyị na-ahọpụta ọtụtụ dum na-ere ákwà na ahịa mmadụ ịgbasa ahịa na China na esenidụt. A na-akpọtụrụ ngwaahịa anyị karịa mba 70 gburugburu ụwa yana mpaghara niile na China, anyị nwetara ezigbo aha ọma na ndị ahịa anyị n'oge anyị ga-anọte aka na nhazi azụmahịa na-aga n'ihu na ahịa na ahịa ụlọ.
Ogo dị elu, ọnụ ahịa asọmpi na ọrụ kachasị mma emeela usa onye isi na ụlọ ọrụ ihe nkiri na-ada mbà.
Sọpụrụ ma ghọta ndị ahịa, gaa n'ihu na-enye ngwaahịa na ọrụ gafere atụmanya ndị ahịa, bụrụkwa ndị mmekọ ebighi ebi. Nke a bụ echiche ọrụ anyị na-ekwusi ike ma na-akwado.
Na nke ọ bụla, ihe mbụ na-abata n'uche bụ na mgbe ụlọ ọrụ ahụ gbanwere site na ahịa nke onye na-ere ahịa na ahịa nke onye na-azụ ahịa, echiche ndị na-eri nri agbanweela. N'ịbụ ndị nwere ọtụtụ ngwongwo (ma ọ bụ ọrụ) chere ihu, ndị na-azụ ahịa dị njikere ịnabata ngwaahịa (ma ọ bụ ọrụ) dị mma. Njirimara ebe a abụghị naanị na-ezo aka n'ụdị dị mkpa nke ngwaahịa a, kamakwa ọ gụnyere usoro nke ihe dịka njirimara nke nkwakọ ngwaahịa na ogo ọrụ. Ya mere, mkpa nke ndị na-azụ ahịa ga-enwerịrị afọ ojuju na oke.
Kwesịrị iguzo n'ọnọdụ ndị ahịa (ma ọ bụ ndị na-azụ ahịa) kama iguzo n'ọnọdụ ụlọ ọrụ nyocha, imewe ma melite ọrụ.
◇ Mee ka usoro ọrụ dịkwuo mma, wusie ike ire ahịa, ahịa, na ọrụ ahịa mgbe a na-ere ahịa, wee nyere ndị ahịa aka idozi nsogbu dị iche iche n'iji ngwongwo eme ihe, ka ndị ahịa wee nwee ọmarịcha mma.
Gbakwunye echiche ndị ahịa dị oke mkpa, ka ndị ahịa na-ekere òkè n'ime mkpebi, ma na-emeso echiche ndị ahịa dị ka akụkụ dị mkpa nke ndị ahịa na-eju afọ.
◇ Mee ihe niile kwere omume iji jide ndị ahịa dị ugbu a.
◇ Mepụta usoro niile ndị ahịa na-eche. Ntọala nke ụlọ ọrụ dị iche iche, mgbanwe nke usoro ọrụ, wdg, ga-elekwasị anya na mkpa ndị ahịa ma guzobe usoro nzaghachi ngwa ngwa na echiche ndị ahịa.
The ahịa bụ mgbe niile ziri ezi.
Nke mbu, onye ahia ya bu onye azuru ahia ya, obughi nsogbu.
Nke abuo, ndị ahịa ghọtara mkpa na ihe omume ntụrụndụ ha, nke bụ kpọmkwem ozi ndị ụlọ ọrụ kwesịrị ịnakọta.
Nke atọ, n'ihi na ndị ahịa nwere "ebumpụta ụwa", ịrụ ụka na otu onye ahịa ahụ na-ese okwu maka ndị ahịa niile.
Atọ atọ nke ndị ahịa afọ ojuju
Afọ ojuju: na-ezo aka na afọ ojuju ndị ahịa na ogo ngwaahịa ahụ.
Ọrụ afọ ojuju: na-ezo aka n'àgwà ziri ezi nke ndị ahịa maka ire ere, ire ere na ahịa mgbe a zụsịrị ngwaahịa. N'agbanyeghị etu ngwaahịa si zuo oke na etu ọnụ ahịa si dị, mgbe ọ pụtara n'ahịa, ọ ga-adabere na ọrụ. "Ọrụ na-ere ahịa na-emepụta ndị ahịa na-adịgide adịgide."
Nlekọta afọ ojuju nke ụlọ ọrụ: na-ezo aka nyocha dị mma nke ọha na eze banyere ike na mkpokọta ụlọ ọrụ.
"5S" na-ezo aka n 'ndebiri nke okwu Bekee nke okwu ise a "SMILE, SPEED, SCCITY, SMART, and Study".
Echiche "5S" bụ ihe ngosipụta ọdịbendị ọrụ nke ndị nnọchianya, nke na-abụghị naanị nwere njirimara nke oge mmadụ, mana enwekwara nnukwu ọlụ.
Mụmụọ ọnụ ọchị: Ntuziaka ịzụ ahịa ga-echebara ndị ahịa echiche tupu ha enwee ike ịmụmụ ọnụ ọchị. Mụmụ ọnụ ọchị pụrụ igosipụta obi ekele na ịnagide ndidi n'obi, ịmụmụ ọnụ ọchị pụkwara ịbụ nke obi ụtọ, gbasiri ike, ma na-echebara ndị ọzọ echiche.
Ọsọ: na-ezo aka na "ngwa ngwa", o nwere ihe abụọ ọ pụtara: otu bụ ọsọ anụ ahụ, ya bụ, gbalịa ịrụ ọrụ ọsọ ọsọ dịka o kwere mee, ekwekwala ka ndị ahịa chere ogologo oge; nke abụọ bụ ọsọ ọsọ nke ngosi, omume ezi obi na nchebara echiche nke ndu ịzụ ahịa Obi ga-eme ka ndị ahịa nwee afọ ojuju, ka ha ghara iche na oge nchere ahụ toro oke ogologo, ma gosipụta ike na omume ngwa ngwa. Ghara ikwe ka ndị ahịa chere bụ otu ihe dị mkpa maka ogo ọrụ.
Eziokwu: Ọ bụrụ na ntuziaka ịzụ ahịa nwere ezi obi iji obi ya niile na-ejere ndị ahịa ozi, ndị ahịa ga-enwe ekele maka ya. Iso ezi obi na ịghara iru abụọ na-arụ ọrụ bụ echiche dị mkpa nke ndu ịzụ ahịa yana ụkpụrụ bụ isi nke imeso ndị ọzọ.
Dexterity: Na-ezo aka na "smart, idozi na idiocha." Nata ndị ahịa n'ụzọ dị ọcha ma dị mma n'anya, na-ebu ngwaahịa nkwakọ ngwaahịa na ịdị umengwụ, ịdị nkọ, na ịdị mma, na ịnweta ntụkwasị obi ndị ahịa nwere mmụọ na-agbanwe agbanwe ma nwee amamihe.
Nnyocha: Mụta mgbe niile ma mụta ihe ọmụma ngwaahịa, nyocha akparamaagwa ndị ahịa yana nnabata yana ịnagide nka. Ọ bụrụ n’ịgbasi mbọ ike ịmụ banyere akparamaagwa ịzụ ahịa ndị ahịa, nka ọrụ ọrụ ahịa, yana ịmụtakwu banyere nkapị ngwaahịa, ọ bụghị naanị na ị ga-eme ka nnabata ndị ahịa gị ka mma, kamakwa ị ga-enwe nsonaazụ kacha mma.
N'ezie, anyị na-ebu ụzọ azụ ahịa maka ịkpata ego, mana ọ bụghị naanị maka ego, mana ọ bụghị naanị maka uru.
◇ Uru bụ ụgwọ ọrụ dị mma. Usoro ịchụso uru bụ ime ka ndị ahịa jiri obi ha laghachi na ụlọ ọrụ afọ ojuju site na nraranye dị ka ihu igwe mmiri, ma nye anyị ego na-enweghị mkpesa na ekele.
◇ Adịla ọsọ ọsọ maka ọganiihu ọsọ ọsọ, gbanwee ọrụ a n'agha, ịpụnara mmadụ na aghụghọ.
Adreesị: No.1 YangIanshan Industrial Mpaghara, Yulv Village, Yutang Town, GuangMing District ShenZhen China
Ekwentị: + 86-755-27164568
Ihe Nlere Anya Vs Wrink Wrap, Adalata Nkume ịkwanyere, Adalata Kechie Film apụta, Polyolefin Pof Ada Ada Film, Polyolefin Ada Ada Kechie Okpomọkụ, Polyolefin Pof Ada Ada Wrap,